31 bilyan oo dheeri ah oo loo qoondeeyey hayadda socdaalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
31 bilyan oo dheeri ah oo loo qoondeeyey hayadda socdaalka
Qodobbadii ugu muhiimsanaa miisaaniyada
La daabacay onsdag 13 april 2016 kl 15.44
Miisaaniyadda dayrta oo maanta la soo ban-dhigay ayey ku caddaayeen in halkoodii laga sii wadi doono maal-gelinta shaqa-abuurka, iskuullada iyo dhowrista cimilada. Iyadoona maal-gelinta ugu badan ee gaarsii-san 31 bilyan oo koron lagu kordhin doono qaabilaadda soo galootiga.
Miisaaniyadda ay dawladdu soo ban-dhigtay saaka ayaa salka ku haya heshiis ey si wada jir ah dawladdu ula gaartay xisbiga Bidixda (V), iyadoona lagu sheegey in kobaca dhaqaale ee dalku yahay mid wanaag-san, shaqa-la’aanta oo gaartay herkii ugu hooseeysay muddo toddoba sannadood ah todoba boqolkiiba, sida ay dawladdu sheegtay.
– 80.000 oo ruux oo hor leh ayaa shaqo u kalaha kolka loo barbar-dhigo talada kolkii aannu la wareegney, sida ay sheegtay Magdalena Andersson, ahna wasiirka dhqaalaha ee dalka Sweden.
Hase yeeshee sawir mugdi ah laga muujiyey mustaqbalka shaqa-la’aanta, waa kolka ey ajaaniibta badan ee dalka magan-gelyada ka soo dalbatay sannadkii tagay ey soo abbaaraan suuqa shaqada.
Midda dhalisay inuu kor u kaco kharashka dawladda ayay ugu wacnayd soo-galootiga faraha badan ee dalka soo gaarey sannaddii ina dhaaftay, middaasina oo dhalisay in hayadda sodaalka loo qoondeeyo miisaaniyad gaarsii-san 2,2 bilyan oo koron si ay ugu maareeyso qaxootiga faraha badan ee dalka soo galay. Halka guud ahaan miisaaniyadda dheeriga ah ee loo qoondeeyey socdaalka ay tahay 31 bilyan oo koron. Kharashka ugu badanina 28,8 bilyan uu geli doono goobaha loo kireeyo ama ey ku nool yihiin dadyoowga dalka qaxa ku yimid ee degmooyinka iyo gobollada.
20 malyan waxaa loo qoondeeyey howlaha la xiriira dib u celinta ajaaniibta diidmada ku hela dalabaadkooda sidoo kale nus malyan loogu talo galay sidii qaxootiga loogu fududeeyn lahaa iney bulshada la qabsadaan iyo sidii loogu fududayn lahaa iney ganacsi bilaabaan.
Taageerada caalamiga oo la dhimay
Miisaaniyadda dayrta ayaa loo qoondeeyay in 4 bilyan la dhimo miisaaniyadda taageerada caalamiga ee dalkani ugu deeqo waddammada soo koreya ama tabaaleeey-san.
Hawlaha ciidanka ammaanka (boliiska) ayaa sidoo kale loo kordhiyey miisaaniyad iyo howlaha la xiriira faqooqa iyo naceeybka. Ciidanka nabad-sugidda waxaa lagu adkeeyey miisaaniyad dheeri ah sidii loo adkayn lahaa howlaha ka hor-tagga argagixisada.
– Waxaannu dooneynaa in aannu adkeeeyno ammaanka dalka, maadaama ay soo baxday cabsi laga qabo khatar wixii ka dambeeyay miisaaniyadda hore, sida ay sheegtay Magdalena Andersson.
Kobac dhaqaale ee sarreeya
Kobaca dhaqaale ee dalka Sweden ayaa ayaa ah midka ugu wanaag-san waddammada dhaca waqooyiga Yurub ee loo yaqaanno – Norden, halka uu caalamka kaga jiro kaalinta lixaad, sida ay wasiirradu sheegtay.
– Waxaannu ku jirnaa xaalad ey shaqooyin badani bannaan yihiin, iyada oo dhanka kale ay dad badani ku sugan yihiin shaqa-la’aan, sida ay sheegtay Andersson. Wasiiraddu waxay sidoo kale soo ban-dhigtay habkii ay dawladdu ugu howl-geli lahayd sidii la isugu aadin lahaa shakhsiga shaqada la iyo goobaha shaqaalaha u baahan, goobo tacliineed oo hor leh ey u sahlanaato in magaalooyinka la isaga shaqa tegi karo.
Howlaha miisaaniyadda ee cimilada ayay ka mid tahay in la dhimay canshuurta laga qaado gawaarida iyo warshadaa ku shaqeeya tamar aan cimilada wax u dhimayn, halka kuwa kalena kor loogu qaaday.